Daryeelka caruurta - www.hameenlinna.fi
Hämeenlinna.fi / Kaupunki-info / Soomaali / Daryeelka caruurta
Waxaad weydiin kartaa talooyin ku saabsan arimaha daryeelka caruurta
xafiiska barta adeegga ee Kastelli shaqaalihiisa qaabilsan u adeegaa caruurta iyo dhalinyarada iyo
xafiiska qaabilaadda qaxootiga ee Pakolaisten vastaanotto shaqaalihiisana talo waad weydiin kartaa.
Isa soo qorsita xanaanada caruurta
Haddii ilmahaagu u baahan yahay in maalintii la hayo, u dalab xanaanada ugu dambayn afar bilood ka hor marka aad u baahan tahay in loo bilaabo. Waayo xanaanada ilmaha lagu hayo saf ayaa loogu jiraa.
Foomka lagu codsado waxaad ka helaysaa barta adeegga ee Kastelli, markaas soo buuxiso isla meeshaas ku soo celi. Waxaad sidoo kale ka buux-buuxin kartaa dalabka intenetka dhexdiisa (Sähköinen päivähoidon hakemus).
Markii xanaanada uu booska ka banaanaado, ayaa ogeysiin guriga laguugu soo diri. Warqadda ogeysiinta ah waxaa la socdo foom lagaa rabo inaad buux-buuxiso oo xanaanada in ilmahaagu bilaabayo ku soo ogeysiiso. Buuxi foomka oo u celi laba todobaad gudahood. U geey foomka xafiiska barta adeegga ee Kastelli shaqaalihiisa qaabilsan u adeegaa caruurta iyo dhalinyarada.
Haddii aad u baahan tahay caawimaad, weydiiso inay ku caawiyaan shaqaalaha xafiiska Pakolaisten vastaanotto.
Ma lacag baa la iska rabaa in la bixiyo caruurta hayntooda?
Haynta caruurtu waa lacag. Waxaa saamayn ku leh dakhliga ama lacagta waalidka soo gasha, hadba inta lacagta xanaanadu noqonayso. Haddii qoyskaaga uu dakhli yari soo galo, xanaanada ilmuhu waa kuu lacag la'aan.
Ilmaha marka guriga lagu hayo
Haddii qoyskiinu haysto ilmo 3-sano ka yar, waa lagu haysan karaa wali guriga. Marka hooyada ama aabbuhu uu ilmaha guriga ku hayo, Kela-da ayaa siisa lacagta taageerada ah ee ilmo guri ku haynta. Qofka haynayaa wuxuu kaloo noqon karaa qof kale oo weyn.
Haddii ilmaha lagu hayo xanaanada caruurta, Kela-du ma bixinayso lacagta ilmo guri ku haynta.
Wax barashada hore ee carbinta ah
Ka hor intaan ilmuhu iskoolka bilaabin waxaa khasab ku ah inuu soo dhigto wax barashada hore ee carbinta ah. Waxaa halkaas ilmaha lagu barayaa wax barasho carbin ah. Taas macnaheedu wuxuu yahay wuxuu baranayaa tabihii uu iskoolka markuu bilaabo u baahnaa. Wax barashada hore ee carbinta ah waa lacag la'aan.
Ilmuhu waxay ku bilaabaan wax barashada hore ee carbinta ah badanaa markay jiraan 6-sano.
Wax barashada hore ee carbinta ah waxay ka dhacdaa xanaanooyinka caruurta iyo iskoolada dugsiyada hoose. Iskoolka hore ee carbinta ah wuxuu bilaabmaa bisha sideedaad, wuxuuna dhamaadaa bisha shanaad. Iskoolka hore ee carbinta ah waxaa ilmaha la soo qoraa xiliga gu'ga oo ah sanadka horaantiisa.
Faahfaahin dheeraad ah waxaad ka helaysaa: